သရုပ်ဆောင်တွေက အနုပညာလုပ်မနေရရင် ရှုပ်နေရမှဆိုတာတကယ်မှန်တယ် - MDY Online Knowledge
Home » သရုပ်ဆောင်တွေက အနုပညာလုပ်မနေရရင် ရှုပ်နေရမှဆိုတာတကယ်မှန်တယ်
သရုပ်ဆောင်တွေက အနုပညာလုပ်မနေရရင် ရှုပ်နေရမှဆိုတာတကယ်မှန်တယ်
လတ်တလော သပွတ်အူလည်နေတဲ့ လေးပွင့်ဆိုင် လင်လုကြတဲ့ မြန်မာဆယ်လီဘရေတီတို့ရဲ့ အရှုပ်ထုပ်အကျဉ်းချုပ်က ဒီလိုပါ။….
စည်သူဝင်းနဲ့ မြတ်နိုးအိမ် တို့က ကြိုက်ပြီးတော့ တွဲနေတာ 7နှစ်တောင် ရှိခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီမှာ သဇင်ထူးမြင့်က စည်သူဝင်းကို တိတ်တိတ်လေး ကြိုက်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။…
စည်သူဝင်းကို ချစ်မိတဲ့အချစ်တွေဟာ ရင်ထဲမှာမြိုသိပ်လို့မရတော့တဲ့အဆုံးတော့ ယွန်းယွန်းကို ရင်ဖွင့်မိတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
စနိုက်မယွန်းယွန်းနဲ့ ခြံခုန်စားဘဲကြီးစည်သူဝင်းတို့က သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့ အဖြစ်ကို နောက်ကွယ်မှာ ကြိတ်ခွီးကြ။…..
ဖြစ်ခြင်တော့ စည်သူဝင်းနဲ့ မြတ်နိုးအိမ်တို့ ပြတ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဂရုနာရှင်မလေး မိယွန်းက စည်သူဝင်းကိုရော မြတ်နိုးအိမ်ကိုပါ နှစ်သိမ့်ချောမော့ပြီး ပြန်ပေါင်းတီးထုပ်ပေးတယ်။….
အဲဒါလည်း အကောင်းတော့မထင်လိုက်.နဲ့ စည်သူဝင်းနဲ့ မြတ်နှိုးအိမ်တို့က ရှေ့ကားနာမည်ခံထားပြီး နောက်ကွယ်က တကယ်အလုပ်ဖြစ်မှာက ဂရုဏာရှင်မလေး မမယွန်း…..
ဒါကို မြတ်နိုးအိမ်က သိတော့ ဂရုဏာရှင်မလေး မမယွန်းကို အဖြတ်ခိုင်းတယ်။ မောင်တော် စည်သူဝင်းက ဖြတ်မပေးတဲ့အပြင် မျက်နှာပြောင်တိုက် ပျော်ပါးကြတာ ငါ့ကို စော်ကားတာပဲဆိုပြီး မြတ်နိုးအိမ် ဒေါသတွေ အချောင်းချောင်းထွက်ပြီး အကုန်ဖွင့်ချ
ဒါပါပဲ လောကမှာ သိုးရေခြုံတဲ့ ဝံပုလွေတေ၊ ကျောသပ်ပေးတာလိုလိုနဲ့ နောက်ကျောကိုဓားနဲ့ထိုးကြသူတွေ၊ သစ္စာတရား မေတ္တာတရားကို တန်ဖိုးမထားကြသူတွေ၊ သူငယ်ချင်း ချစ်သူ ထားရမယ့်စည်းတွေ ဘောင်တွေ ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။…..
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ ဘဝမဟုတ်ပေမယ့် ဘဝမှာအချစ်ဆိုတာ အရေးကြီးတာလက်ခံနားလည်ထားပြီး အရှက် သိက္ခာ မာန ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ သတိရကြပါအုံးဆိုတာ နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေက ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို ပညာပေးသွားကြပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီး​ေရ
လတ္တေလာ သပြတ္အူလည္ေနတဲ့ ေလးပြင့္ဆိုင္ လင္လုၾကတဲ့ ျမန္မာဆယ္လီဘေရတီတို႔ရဲ႕ အရႈပ္ထုပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္က ဒီလိုပါ။.
စည္သူဝင္းနဲ႕ ျမတ္နိုးအိမ္ တို႔က ႀကိဳက္ၿပီးေတာ့ တြဲေနတာ 7ႏွစ္ေတာင္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီမွာ သဇင္ထူးျမင့္က စည္သူဝင္းကို တိတ္တိတ္ေလး ႀကိဳက္ေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။
စည္သူဝင္းကို ခ်စ္မိတဲ့အခ်စ္ေတြဟာ ရင္ထဲမွာၿမိဳသိပ္လို႔မရေတာ့တဲ့အဆုံးေတာ့ ယြန္းယြန္းကို ရင္ဖြင့္မိတဲ့ သဇင္ထူးျမင့္
စနိုက္မယြန္းယြန္းနဲ႕ ၿခံခုန္စားဘဲႀကီးစည္သူဝင္းတို႔က သဇင္ထူးျမင့္ရဲ႕ အျဖစ္ကို ေနာက္ကြယ္မွာ ႀကိတ္ခြီးၾက။..
ျဖစ္ျခင္ေတာ့ စည္သူဝင္းနဲ႕ ျမတ္နိုးအိမ္တို႔ ျပတ္တယ္။ အဲဒီမွာ ဂ႐ုနာရွင္မေလး မိယြန္းက စည္သူဝင္းကိုေရာ ျမတ္နိုးအိမ္ကိုပါ ႏွစ္သိမ့္ေခ်ာေမာ့ၿပီး ျပန္ေပါင္းတီးထုပ္ေပးတယ္။.
အဲဒါလည္း အေကာင္းေတာ့မထင္လိုက္.နဲ႕ စည္သူဝင္းနဲ႕ ျမတ္ႏွိုးအိမ္တို႔က ေရွ႕ကားနာမည္ခံထားၿပီး ေနာက္ကြယ္က တကယ္အလုပ္ျဖစ္မွာက ဂ႐ုဏာရွင္မေလး မမယြန္း..
ဒါကို ျမတ္နိုးအိမ္က သိေတာ့ ဂ႐ုဏာရွင္မေလး မမယြန္းကို အျဖတ္ခိုင္းတယ္။ ေမာင္ေတာ္ စည္သူဝင္းက ျဖတ္မေပးတဲ့အျပင္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ေပ်ာ္ပါးၾကတာ ငါ့ကို ေစာ္ကားတာပဲဆိုၿပီး ျမတ္နိုးအိမ္ ေဒါသေတြ အေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ၿပီး အကုန္ဖြင့္ခ်
ဒါပါပဲ ေလာကမွာ သိုးေရၿခဳံတဲ့ ဝံပုေလြေတ၊ ေက်ာသပ္ေပးတာလိုလိုနဲ႕ ေနာက္ေက်ာကိုဓားနဲ႕ထိုးၾကသူေတြ၊ သစၥာတရား ေမတၱာတရားကို တန္ဖိုးမထားၾကသူေတြ၊ သူငယ္ခ်င္း ခ်စ္သူ ထားရမယ့္စည္းေတြ ေဘာင္ေတြ ဘာမွမရွိေတာ့ပါဘူး။..
တကယ္ေတာ့ အခ်စ္ဆိုတာ ဘဝမဟုတ္ေပမယ့္ ဘဝမွာအခ်စ္ဆိုတာ အေရးႀကီးတာလက္ခံနားလည္ထားၿပီး အရွက္ သိကၡာ မာန ကိုယ္က်င့္တရားေတြ သတိရၾကပါအုံးဆိုတာ နာမည္ႀကီးဆယ္လီေတြက ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္လို ပညာေပးသြားၾကပါတယ္ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ
တချိန်က mrtv4 ရဲ့သတင်းတင်ဆက်သူကိုကျော်သက်လင်းရဲ့ လေးစားဝမ်းနဲဖွယ်လုပ်ရပ်တခု